wasiirka arimaha dibadda kenya oo lakulmay hogaamiya kooxeedyada soomaaliyeed.
shalay galab ayaa wasiirka arimaha dibada ee dalka kenya Kalonso Musyoka waxaa uu ku qaabilay magaalada Nairobi dhowr kamid ah hogaamiyayaasha soomaaliyeed ee ku shirku uga socday Eldoret iyagoo ka wadahadlay murankii baryahan ka taagnaa Eldoret.
Hogaamiyayaasha soomaaliyeed oo ay kamid ahaayeen raisul wasaaraha dawladda kumeel gaarka Xasan Abshir Faarax iyo Xuseen maxamed caydiid ayay kaga cabanayeen in gudiga farsamada IGAD uu dib Udhaca iyo is fahan la'aanta iyagu usabab yihiin ayna dalbanaayaan in isbadal lagu sameeyo.
waraar xogogaal ah waxay iisheegeen in laga yaabo 2 todobaad gudohood in dawladda cusub ee dalka kenya ay isbadal ku samayso maamulka shirka si loogu talaabsado qaybaha muhimka ah ee shirka u dhiman.
wasiirka arimaha dibada Kalonso Musyoka ayaa lagu wadaa in maalmaha uu ugudbin doono madaxwayne Kibaki dhamaan waxyaabihii ay shalay isla soo hadal qaadeen hogaamiyayaasha siyaasadda oo ku saabsan cabashooyinka ay soo gudbinayaan.